Ngefestile yam: I-Ariana Godoy Trilogy | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | 14/04/2022 15:22 | Ababhali, Iincwadi, Inoveli
U-Ariana Godoy ngomnye weyona mizekelo yaziwayo yento yamva nje: impumelelo yoncwadi ukusuka ekuqalisweni kwee-portal zewebhu. Lo mbhali waseVenezuela waqala ngo-2016 ukwenza ukuhanjiswa rhoqo Ngefestile yam kwiWattpad. Leyo yayiyisiqalo se-trilogy yabazalwana base-Hidalgo, abadumileyo abangazange bayeke ukukhula ukususela ngoko.
Ukongezelela, umbhali waseMzantsi Merika wapapasha olu ngcelele ngesiNgesi nangeSpanish; ngaloo ndlela, iye yasasaza usasazo phakathi kwabafundi—ingakumbi abantu abaselula—abathetha isiNgesi nesiSpanish. Ngelo xesha, UGodoy unenye yeeprofayile ezinabalandeli abaninzi (ngaphezu kwama-700.000) kule portal ixeliweyo. Ngoko, Ayimangalisi into yokuba inethiwekhi yeNetflix ithathe isigqibo sokwenza iifilimu ezibonisa kwezi ncwadi zintathu zothotho.
1 Isishwankathelo Ngefestile Yam
1.2 iminqweno efihlakeleyo
1.3 Ngaba isiphelo esonwabisayo sinokwenzeka?
2 Isishwankathelo Ngawe
2.3 ikhaya eliqhekekileyo
3 Ngemvula (isakhula)
4 Ityala elikhethekileyo?
4.1 Ezinye izithuba ezidumileyo kwiWattpad nguAriana Godoy
Isishwankathelo se Ngefestile yam
Ukuqala kwe-trilogy yazisa uRaquel Mendoza, unayo ntombazana umkhondo (ngokwamazwi akhe) yommelwane wakhe uAres. Lo ngumntwana wesibini kubantwana abathathu besibini saseHidalgo, usapho olutyebileyo olunenkampani yeteknoloji kunye nendlu enkulu. Ngokwahlukileyo koko, kufuneka asebenze kwaMc Donald ngelixa egqibezela unyaka wakhe wokuqala kwisikolo samabanga aphakamileyo ukuze ancede umama wakhe (umongikazi).
"Yonke into yaqala ngesitshixo seWiFi", utsho umlinganiswa ophambili ekuqaleni kokubalisa. Le yimeko engafane yenzeke. ngokuba apollo, omncinane kubazalwana bakaHidalgo, wayenjalo kwipatio yendlu kaRaquel "ukuba" isignali ye-intanethi. Oko kukuthi, akukho ngqiqweni ukuba ummelwane osisityebi "u-parasitize" womnatha wabamelwane bakhe abakumgangatho ophantsi (nangona lo mbandela ucaciswa kamva).
UMendoza ufunda kwisikolo sikarhulumente kwaye ufuna ukugqibezela into angazange ayenze utata wakhe ongasekhoyo: ukupapasha imibhalo yakhe. Kwelinye icala, uAres ufunda kwiziko labucala elidumileyo kwaye unomnqweno (ongachazwanga) wokuba ngugqirha. Kodwa abazali balo mfana bafuna ukuba abe ngusomashishini ukuze aqhubeke nesiko lentsapho.
Ngakolunye uhlangothi, uyalwazi lonke uhambo lwakhe kwaye umlandela ngokufihlakeleyo kwimidlalo yakhe yebhola ekhatywayo. Ngoku, isizathu WiFi kukuba abantwana bazane. Ekuhambeni kwexesha, kuyacaca ukuba wayeyazi indlela awayevakalelwa ngayo uRaquel.. Nangona kunjalo, inkwenkwe entle ayizukunikela ngobomi bayo njengentliziyo enye ngokulula.
Ngaba isiphelo esonwabisayo sinokwenzeka?
Umhlobo we-protagonist uvusa umona we-Ares. Ngenxa yoko, ugqiba kwelokuba azibophelele ekumthandeni ngakumbi nangona engaqinisekanga ukuba uya kusigcina isithembiso sakhe. Ekuphakameni kweploti, ukungafani okuqhelekileyo okuvela kuyo iimeko ezichaseneyo zabathandanayo ababini iiklasi ezahlukeneyo kakhulu zentlalo.
Isishwankathelo se Ngawe
Inxalenye yesibini yetrilogy igxile kuArtemis —unyana omkhulu wesibini sakwaHidalgo—, ingcali ngezoqoqosho esandul’ ukuphumelela, ephathiswe ukunyamekela ishishini lentsapho. Njengabakhuluwa bakhe ababini abancinci, uphefumlela ukuncwina uninzi lweemazi zedolophu kunye ubandakanyeka kubudlelwane bothando iphikiswana noko kunye noClaudia, isicakakazi sendlu enkulu.
Incwadi Iqala ngo-Artemis ebuyela edolophini kunye nentombi yakhe yasekholejini emva kokufunda phesheya. Ekwamkeleni, kwaziswa ukuba unyana omkhulu uya kuba ngumongameli weshishini lentsapho kwaye, xa ebona uClaudia, iimvakalelo zokukhanga phakathi kwabo ziqala ukuvela kwakhona. Nangona kunjalo, uthando olunokubakho phakathi kosomashishini oselula kunye nesicakazana sigcwele imiqobo.
U-Artemis uzama ukutshabalalisa ubudlelwane bakhe bangaphambili ukuze azinikele kuClaudia, kodwa akanako ukwenza oko ngenxa yokuba intsapho yomtshakazi kunye noHidalgos babelana ngezinto ezinomdla. Ngendlela enye, Umama we-protagonist uyachasa umanyano "kunye nentombi yekhoboka leziyobisi" kwaye woyikisa ngokujula uClaudia kunye nomama wakhe kwindlu enkulu ukuba akayeki kwiinjongo zakhe zothando.
Ngenxa yesi sizathu, uClaudia wenqaba uArtemis xa bobabini beselula, nto leyo eyabangela ukuhlukana phakathi kwamakhwenkwe de abuye. Kufuphi ne-denouement, abazali baka-Artemis baqhawula umtshato emva kokuba izoyikiso ze-matron kumantombazana zifunyenwe.
Claudia “wawuzuza njengelifa” umsebenzi wasekhaya emva kokuba unina (owayengumthunywa owayeqeshwe nguyisemkhulu uHidalgo) wagula. Ngokufanayo, naye Ulibhinqa eliselula elinomothuko wangaphambili kuba umama wakhe wayelibhinqa elixhatshaziweyo. ngenxa yendoda yakhe kwaye ngamakhoboka eziyobisi. Ngaphezu koko, ngaphambi kokuba asebenze kule ndlu inkulu, lo mama wayethengisa ngomzimba yaye ehlala nentombi yakhe ezitratweni.
Iyafana neenjongo zomsebenzi ka-Ares ofuna ukuba ngugqirha en Ngefestile yam, UArtemis akafuni ukuba ngusomashishini. Eneneni, umkhuluwa unqwenela ukuba ligcisa. Ekugqibeleni, ungenelelo lukaTat'omkhulu u-Hidalgo luthatha isigqibo sokuba abafana bakwazi ukusebenzisa ubizo lwabo lokwenyani kunye nokudityaniswa kwamakhwenkwe kunye namantombazana abathandayo.
Ukuza kuthi ga ngoku, yonke i-arc ye Ngemvula ayipapashwanga ngokupheleleyo. Ngomqulu wesithathu we-saga yabazalwana baka-Hidalgo, kuyaziwa ukuba lithuba lokuxelela ibali lika-Apollo, omncinane kubo. Nangona eyinkwenkwe ethandekayo neneenjongo ezintle, “ingaba oko kuya kwanela ukuba enze kakuhle ebomini naseluthandweni?”
Ukuqala kukaGodoy kwiWattpad kunye nogqabhuko-dubulo lwentengiso olwalandelayo lumele uhlobo lwendlela ekhulayo kwinkalo yoncwadi yamazwe ngamazwe. Ngapha koko, ngo-2020 Iplanethi uphehlelele isitampu esikhethekileyo sokuprinta ephepheni amabali azelwe kwelo qonga. Ukongeza, UAlfaguara wayengumpapashi owathi ngo-2019 wagqiba ekubeni aguqule iyelenqe elidumileyo lothando Ngefestile yam.
Ezinye izithuba ezidumileyo kwiWattpad nguAriana Godoy
UFleur: Isigqibo sam esibi
Landela ilizwi lam
series Imiphefumlo elahlekileyo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » ngefestile yam